ट्रम्पलाई डलरको घमण्ड ? भने - बिट्क्वाइन र अन्य क्रिप्टोकरेन्सीमा विल्कुलै विश्वास छैन
Thu, Nov 14, 2019 at 11:07am
शुक्रबार, २७ आषाढ २०७६,	- एएफपी .
वासिङ्टन, २७ असार :
एएफपी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले क्रिप्टोकरेसीमा आफूलाई विश्वास नरहेको बताउनुभएको छ । उहाँले क्रिप्टोकरेन्सी मुद्रा होइन भन्दै यस मुद्राको व्यापार गर्न चाहनेहरु बैंकिङ नियमनको दायरामा आउनुपर्छ भन्नुभयो ।
करिब दुई अर्ब प्रयोगकर्ता भएको फेसबुकले सन् २०२० मा लिब्रालाई अरु साझेदार समेतको सहकार्यमा प्रचलनमा ल्याउने घोषणा गरेको छ । यसले विश्वको वित्तीय कारोबारलाई नै प्रभावित तुल्याउने अनुमान गरिएका छन् ।
तर राष्ट्रपति ट्रम्पले फेसबुक र अरु कम्पनीले क्रिप्टोकरेन्सी प्रारम्भ गर्दा अमेरिकी र अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ नियमन प्रणाली दुबैलाई स्वीकार गर्नुपर्ने चेतावनी दिनुभयो । “संयुक्तराज्य अमेरिकामा एउटा मात्र वास्तविक मुद्रा ९अमेरिकी डलर० छ, र यो विगतको भन्दा बढी मजबूत छ ।”
विपद् व्यवस्थापनका लागि ३० हजार मेट्रिक टन धान खरीद गरिने
आर्थिक ऐनमा संशोधन : सुनका गहनाको भन्सार बढ्यो, वाइनमा अन्त:शुल्क छुट, के के परिवर्तन ?
प्रत्येक नेपालीको थाप्लोमा ३६ हजार ऋण ! तथ्यांक हेर्दा जे देखियो...
बढ्यो सुनको भन्सार दर, कति ल्याउँदा कति तिर्नुपर्छ ?
अदालतको आदेश : व्यापारी रुप ज्योति र छोरी सुरुची ३ दिन थुनामा
भारतको प्याज प्रतिवन्धले नेपाललाई छोएन !!
दाबी भुक्तानीमा विलम्ब नगर्न अर्थमन्त्रीको आग्रह
होटल क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी वृद्धि, ३ महिनामा ३९ वटा पर्यटन उद्योग
स्वीस सरकारद्वारा नेपाललाई दुई अर्ब दश करोड अनुदान
आर्थिक कूटनीतिमा लाग्न परिसङ्घको सुझाव
सुदूरपश्चिमको पहिलो औद्योगिक क्षेत्रमा ११७ उद्योग स्थापना गर्न प्रस्ताव
३ महिनामा निर्यातमा १४ प्रतिशतले वृद्धि ! व्यापार घाटा १० प्रतिशत !!
'माथिल्लो त्रिशूली एक'मा ९ संस्थाले ५१ अर्ब लगानी गर्ने
कडा मिहिनेत गरेर परीक्षा दिएका थियौँ, सफलता मिल्यो : अर्थमन्त्री खतिवडा
तिहार सकिएलगत्तै सस्तियाे तरकारी, उपभोक्तालाई राहत मिल्ने
बंगलादेशका राष्ट्रपति नेपाल आउँदै, यस्ता सम्झौता हुँदै
सांसद कोषको छ करोड विनियोजन
‘इज अफ डुइंग बिजनेस’ सुचीमा नेपालले मार्यो ठूलो फड्को, दक्षिण एसियामै तेस्रो
नेपालमा व्यवसाय गर्ने वातावरण सुधारियो : विश्व बैंक, शिर्ष स्थानमा न्यूजिल्याण्ड !
नोट सक्कली हो कि नक्कली, यसरि छुट्टयाउनुहोस्
दीगो विकासका लागि अनिवार्य शर्त : स्वदेशी लगानीकर्तालाई विशेष प्राथमिकता
“हामीले सरकारलाई पैसा बुझाउँछौँभन्दा पनि यति सास्ती खेप्नुपर्ने ?”
सुनको मूल्य घटयो , कतिमा हुँदै छ कारोबार ?